Xildhibaanad ka af-celisey war uu sheegay Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Puntland | Hadalsame Media
Home Wararka Xildhibaanad ka af-celisey war uu sheegay Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Puntland
Xildhibaanad ka af-celisey war uu sheegay Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Puntland
(Garoowe) 02 Luulyo 2020 – Xildhibaan Nimco Cabdi Caarshe oo ka tirsan Baarlamaan Goboleedka Puntland ayaa ka jawaabtey war uu horay u sheegay Xil. Cabdiqani Dhaashane, iyada oo warkeeda ku bilowday:
”Anigoo ku hadlaya afka gudidada xuquul insaanka iyo horumarinta haweenka prlamaanka puntalnd waxaan canbaaraynayaa hadalkii malintii shalayto ahayd ka soo yeedhay Xildhibaan Cabdiqani Faarax Dhaashane, kaas oo uu ku sheegay in haweenku aysan masuuliyad qaadi karin xilna lagu aamini karin,” ayay tiri.
”Walaalkay Xildhibaan Dhaashane waxaan ugu baaqayaa in uu hadalkaa raalli gelin ka bixiyo, waayo Wuxuu meel uga dhacay sharaftii iyo karaamadii uu haweenku lahaa. Haweenka somaliyeed dadaal badan bay ku bixiyeen sidii dalkaan loo horumarin lahaa waxay u horaan mar walba xaaladi timaado naftooda maalkooda iyo caqligooda taas oo ku tusinaysa inay kaga laxe-jeclo badan yihiin taas oo aan la iska indho tiri karin
Xil. Nimco ayaa tusaale u keentay sababta ay haweenku mas’uuliyadda ugu fiican yihiin. ”Diinteenna suubban wax badan bay haweenka ka hadashay in dhanka masuuliyada ay kaga wanaagsan yihiin Raga masuuliyadu Waxay ka bilaamataa guriga qof markuu masuuliyada gurigiisa ku guulaysto ayuu dadka kalena hogaamin karaa.
”Waxaan haweenka Soomaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland ugu baaqayaa in ay gacmaha is qabsadaan oo ka shaqeeyaan sidii ay dalkooda iyo dadkooda u hormarin lahaayeen.” ayay kusoo koobtay warkeeda.
Previous articleGabdho xusayey 1-da Luulyo oo Jigjiga lagu xirxirey & wiil kale oo safar ahaa oo Gebiley lagu qabtay
Next articleXOG: Beesha Caalamka oo Deni & Axmed ku cadaadinaysa inay tagaan shirka Xamar (Laba dal oo iyaga taageersan)